कार्यवहाक मेयर डाँगीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयाे, जाँडरक्सि खाएर मर्यादा विर्सेकाे आराेप « Daily News Bank
कार्यवहाक मेयर डाँगीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयाे, जाँडरक्सि खाएर मर्यादा विर्सेकाे आराेप
तुलसीपुर, २० वैशाख ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यबहाक मेयरको जिम्मेवारी शुक्रवार बाट वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष नवराज लामिछानेलाई दिइएकाे छ ।मेयर घनश्याम पाण्डेले सूर्यबहादुर डाँगीलाई हटाएर वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष लामिछानेलाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार विहीवार बेलुका तुलसीपुर ४ मा कार्यबहाक मेयर डाँगी, वडा नं. ४ का अध्यक्ष बालकृष्ण राना र मेयर पाण्डेका स्वकीय सचिव धर्मबहादुर वलीले मदिरा सवेन पछि फेसबुक लाईभमा आएर कतिपय वडा अध्यक्ष, मेयर पाण्डे लगाएतको कार्यशैलीको टिप्पणी पनि गरेका थिए । त्यस्तै कार्यबहाक मेयरवाट हटाइएका नगर प्रबक्ता समेत रहेका डाँगीलाई कार्यपालिकाको बैठक बसालेर अनुमोदन गराएर उक्त पदवाट समेत हटाउने कसरत सुरु गरेका छन् ।
विहीवार नगर प्रमुखको हैसियतले डाँगी, वडा नं ४ का अध्यक्ष बालकृष्ण राना मेयरका स्वकीय सचिव वली लगायतको टोली अनुगमनको लागि वडा नं ४ मा पुगेको थियो ।वडा नं. १२ का अध्यक्ष समेत रहेका डाँगी नगर प्रबक्ताको जिम्मेवारीमा पनि छन् ।
त्यही क्रममा उनीहरु मदिरा पसलमा छिरेर मदिरा सेवन पछि फेसबुक लाइभमा आएर बोलेको आरोप लागेको छ । यस बिषयमा काठमाण्डाैँ रहेका मेयर पाण्डेले जाँडरक्सि खाएर मर्यादा विर्सेनेहरुकाे कुरा धेरै नगर्न आग्रह गरेकाे बताइएकाे छ ।